वर्थिङ सेन्टरको स्थापना पछि घरमै सुत्केरी हुनेको दर शून्य| Nepal Pati
मंगल ग्रहमा गयो पहिलोपटक भूकम्प
शताब्दीकै सबैभन्दा ठुलो हिरा भेटियो
पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको स्मृति दिवस मनाइदैं
उत्तरी मोजाम्बिकमा तुफानले पुन: मच्चायो बबण्डर, ३० हजार प्रभावित
औलो भित्राउन पहाड चढ्दै लामखुट्टे
उत्तर कोरियाली नेता किमको रुसी भ्रमणका एजेण्डा के-के हुन् ?
वर्थिङ सेन्टरको स्थापना पछि घरमै सुत्केरी हुनेको दर शून्य
आइतवार, चैत्र ११, २०७४
ललितपुर । लुभू प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको सेवा क्षेत्रमा घरमै सुत्केरी हुने दर शून्य छ । एक दशक पहिले ‘बर्थिङ सेन्टर’(जन्मकेन्द्र) शुरु भएपछि सबै गर्भवती स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन थालेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्य सहायक अर्जुन लाबदले सो क्षेत्रमा सबै महिलाले नियमित जाँच गर्ने र स्वास्थ्य संस्थामा नै गएर प्रसूति सेवा लिने गरेको बताए ।
पहिले नियमित जाँचका लागि समेत महिलालाई ग्वार्को वा लगनखेल पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । उनी भन्छन्, “अहिले आर्थिक रुपमा सम्पन्न मात्रै होइन विपन्न पनि स्वास्थ्य संस्थामा जान्छन् ।” केन्द्रमा स्थानीयवासी महिला पनि आउँछन् । अस्थायी रुपमा बसोबास गरेका विपन्न महिलाका लागि केन्द्र अझै सजिलो भएको छ ।
नजीकैको स्वास्थ्य संस्थामा सेवा पाउने भएपछि महिलाले अरु काम भ्याएर समेत जचाउने गरेका छन् । केन्द्रमा जाँच गर्न आउनेका तुलनामा सुत्केरी हुन आउने कम छन् । वार्षिक झण्डै तीनचार सय महिला जाँच गराउनका लागि आउँछन् । केन्द्रमा सबै खालका जाँचका लागि चिकित्सक र उपकरण छन् ।
उनी भन्छन्, “नियमित रुपमा गाउँगाउँमा कार्यक्रम गरी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुँदाका फाइदाबारे सम्झाइरहेका छौंँ ।” गत साउनदेखियता २१ महिलाले केन्द्रमा सन्तानलाई जन्म दिइसकेका छन् । यो संख्या अघिल्लो वर्ष ३० थियो ।
तराईमा लामखुट्टेबाट औलो संक्रमण हुनु सामान्य हो। अ...
सहिद विकका माइलो छोराको पेटको अप्रेसन गर्दा ६ लाख ऋण
काठमाडौं । ०६२र६३ को जनआन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले ...
चीन भ्रमणमा जानु अगाडी राष्ट्रपति भण्डारीले गराइन पेटको इन्डोस्कोपी
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज (सोम...
स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको हस्पिटलमा एक नर्सको शव झुन्डिएको अवस्थामा फेला
जनकपुर । धनुषा जिल्लास्थित स्वास्थ्य राज्यमन्त्र...
सुफी दार्शनिक एवं सन्त ‘कलन्दर’को समाधिस्थलमा भक्तजनको भिड (हेर्नुहोस् १० फोटोमा !)
काठमाडौं । सुफी दार्शनिक एवं सन्त लाल शाहबाज कलन्दर सुफी गितहरुमा खुबै सुनिने ना...
भूकम्प र चार वर्ष
काठमाडौं । २०७२ वैशाख १२ गतेको अपरान्ह अर्थात् आजकै दिन गोरखा जिल्लाको बारपाक के...
नेकपामा दुई सदस्यीय सर्वसम्मत सहमति, नहोस है क्षति !
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चलाइरहेको छ । विश्व कम्युनिष्ट...
आज विश्व पुस्तक तथा प्रतिलिपि अधिकार दिवस, देशभर मनाईँदै
आज अप्रिल २३, विश्व पुस्तक तथा प्रतिलिपि अधिकार दिवस। विश्व साहित्यमा महत्वपूर...
अध्यक्षद्वयको सपना साकार, ७७ वटै जिल्लाले पायो नेतृत्व
काठमाडौं । करिब वर्ष दिनको अन्यौल र शंकाको अन्त्य गर्दै नेकपाले ७७ वटा जिल्लाको ...
ललिता निवासको जग्गा नीजि बनाउने खेलमा को-को मुछिए ?
काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवास परिसरमा रहेको सरकारी जग्गा षड्यन्त्र मुलक ढ...
नेकपामा ८ केन्द्रिय सदस्यले गरे सचिव पद अस्वीकार
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका आठ जना केन्द्रिय सदस्यहरुले जिल्ला ...
विकासकोे लागि गुणस्तरीय शिक्षा– शुत्र
नेपालको विकास पछि परेको र शिक्षा नै विकासको आधार भएका कारण शिक्षाको गुणस्तरको चु...
भाषण गरिरहेका कांग्रेस नेता पटेलले खाए मञ्चमै थप्पड( हेर्नुहोस् भिडियोमा !)
गुजरात । गुजरातको सुरेन्ददरनगर जिल्लामा आयोजित ‘जन आक्रोश सभा’को मञ्चमा उभिएर एक...
अनुवाद बिना विश्वले पढ्न सक्ने किताब प्रकाशित
एजेन्सी । आजसम्म कुनै पनि एक भाषामा लेखिएको पुस्तक अनुवाद बिना संसारभरका पुस्तक ...